Collabora Hofisi, LibreOffice inouya kuApple neIOS nekuda kweCollabora | Linux Vakapindwa muropa
Kana tichitaura nezve suites suites, chinhu chekutanga chinouya mupfungwa kwemakumi emakore ndeye Microsoft Office. Zvave uye zvichiramba zviri zvakanyoreswa zviri pamutemo uye zvisiri pamutemo pasute pane mazhinji makomputa, ayo atinoyeuka achishandisa Windows anoshanda masystem, asi kune zvimwewo sarudzo senge Apple's iWork kana Google services. Pane rimwe divi, LibreOffice, iyo inoiswa nekusarudzika mukuparadzira kwakawanda kweLinux, iri sarudzo yakavhurwa sosi yatinogona kushandisa pamafoni mbozha pasi pezita re Collabora Hofisi.
Vazhinji vashandisi havadi shanduko. Neichi chikonzero, vazhinji vashandisi veLinux neMacOS vanoshandisa imwe yesarudzo dzinowanikwa kushanda muMicrosoft Office pane mamwe masisitimu asiri Windows, saka zvingangoita kuti vanozopedzisira vawana sevhisi inowanikwa mu office.com. Uye isu vedu takatogadzira LibreOffice, patinenge tichida kuishandisa pane mbozhanhare tinofanirwa kushandisa dzimwe sarudzo ... tinogona kuishandisa pane Android uye iOS.
Collabora Hofisi: LibreOffice yemasefa anoshanda masystem
Collabora Hofisi iri yakavhurwa sosi hofisi suite iyo yakavakirwa paLibreOffice. Musiyano uripakati peizvi nezvimwe zvishandiso zvaive zviripo ndezvekuti Collabora inosanganisira ese marudzi ekugadzirisa maturusi, kwete senge iwo mamwe anga ari ekuona gwaro, izvo zvisina kuita mushe kana isu tichifunga kuti magwaro mazhinji anogona kuverengerwa natively.
Collabora Hofisi ine yakagadzirirwa kuve nyore kushandisa pane nhare mbozha uye inobata. Iyo yekushandisa interface yave yakavakirwa pa Shandira Pamhepo, iyo yatingati ndiyo Collabora vhezheni yeambotaurwa office.com. Musiyano mukuru neCollabora Online, uye zvingave sei zvisiri izvo kufunga kuti zviri nezvemaapp, ndeyekuti Collabora Hofisi inoshanda isina internet yekubatanidza.
Kana iwe uchifarira kushandisa Collabora Hofisi pane yako Android kana iOS chishandiso, unogona kuitora kubva Iyi link iyo Android vhezheni uye kubva uyu mumwe iyo vhezheni ye iPhone kana iPad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Collabora Hofisi, LibreOffice nematurusi ayo ese anouya kuApple neIOS nekuda kweCollabora